Ataraxia Ururinta Dahabku - Joornaalka Naqshadeynta
Ururinta Dahabku Isku-darka moodada iyo tikniyoolajiyadda horumarsan, mashruucu wuxuu higsanayaa inuu abuuro qaybo gogo 'dahab ah oo ka dhigi kara waxyaabihii hore ee Gotiy-ga qaab cusub, kana wada hadla suuragalka dhaqan ahaan duruufaha casriga ah. Iyada oo ay xiiseyneyso sida Gothic u dhaqdhaqaaqeyso dhageystayaasha, mashruucu wuxuu isku dayayaa inuu ka xanaajiyo waaya-aragnimada shaqsiyeed ee gaarka ah iyada oo loo marayo is-dhexgal ciyaar, iyada oo sahamineysa xiriirka ka dhexeeya naqshadeynta iyo kuwa xirta. Gemstones silica, sida shey yar oo loo yaqaan 'eco-imprint', ayaa loo jaray dhul si aan caadi ahayn loo dhigay si ay midabkooda ugu tuuraan maqaarka si kor loogu qaado is dhexgalka.
Magaca mashruuca : Ataraxia, Magaca naqshadeeyayaasha : Yilan Liu, Magaca macmiilka : Yilan Jewelry.
Ururinta Dahabku Yilan Liu Ataraxia